Izixhumi zezixhumi zengeza ukuvikelwa kwe-IP67 - Micro-Semiconductor.com
Amakepisi akalwe nge-IP67 futhi asiza ukuvimbela ukwakheka komswakama, uthuli, nokungcola ebusweni bokuxhuma bokuxhuma.
Ngenxa yokwakheka kophawu lwangaphakathi lokuxhumana, izixhumi zeNautilus sezivele zivalwe zingavulelwanga i-IP68. "Ama-caps azohlinzeka ngokuthula kwengqondo nokuxhumana okushiywe kudalulwe ezindaweni ezinzima," ngokusho kwenkampani. "Izicelo ezifana nemishini ephathekayo engaphandle edinga ukuxhumeka futhi inqanyulwe njalo kungazuza ekepisi uma i-antenna ingasetshenziswanga ukuvimbela ukuqoqwa kothuli nodoti uma usensimini."
Ama-caps afinyelela uphawu lwe-IP67 nge-SMA (ukukhweza emuva), izinhlobo ze-N-Type ne-TNC zebanga le-Nautilus - futhi ziyizinketho njengamakhethini othuli wezinhlobo ezingezona zeNautilus zalezi zinhlobo zezixhumi.
Ama-caps we-alloy caps aqediwe ku-nickel plating (N naku-TNC) noma nge-gold plating (SMA) futhi atholakala noma ngaphandle kokunamathiselwe kweketanga.
Le nkampani ihlinzeka ngemibiko yokuhlola ezosetshenziswa eceleni kweminye imithombo yayo yemikhiqizo nemidwebo.
Izindwangu zezixhumi zeNautilus ziyatholakala kwaDigi-Key
IGradConn eseTaiwan yenza izixhumi zeSIM khadi nemihlangano yekhebula ye-coaxial, kanye nezixhumi zebhodi-to-board ezisuka ku-1.00 kuye ku-5.08mm izixhumi ze-pitch nezintambo eziya ebhodini kuzindawo ezi-0.8, 1 & 1.2mm. Ikhiqiza eChina naseTaiwan ezikhungweni zivunyelwe ku-ISO9001: 2015 naku-ISO14001: 2004.